Soosaarida Acid Nucleic Acid
Nidaamka Ogaanshaha PCR waqtiga dhabta ah
Shaabad / Filim
Saxan qoto dheer
Waxaa loo isticmaalaa keydinta, gaadiidka iyo dib u soo celinta waxyaabaha dareeraha dareeraha ah ee kala duwan ama alaabta ceeriin ee budada ah. Inta badan dhalooyinka reagent-ka waxay ka sameysan yihiin polypropylene waxayna leeyihiin waxqabad wanaagsan oo wax lagu xiro. Daboolka iyo jirka dhalada waxaa loogu talagalay faragalin ku habboon si loo hubiyo in saameyn wanaagsan oo shaabad leh aan lahayn goomaato. Dhalooyinka reagent-ka caaga ah ayaa inta badan loo adeegsadaa tijaabinta reagentarada (in vitro reagent reagent) iyo xirmooyinka kale ee dareeraha ah
1.Xulo alaabta ceyriinka leh dulqaadka kiimikada wanaagsan, ma laha sunta bayoolojiga, heerkulka sare iyo jeermiska looga dhaliyo cadaadiska sare.
Afka dhalada wuxuu qaataa naqshadeynta leakproof, ma jiro dabool gudaha ah ama dhaqe gudaha ah, oo si sahlan loo ogaan karo leakproof.
3. Afka dhalada waxaa loogu talagalay af balaaran, oo ay fududahay in la qaato dareeraha lagana ilaaliyo wasakhda kala tagga.
4.Waa sahlan tahay in la keydiyo oo la qaado waxyaabaha dareeraha iyo budada ah.
Naqshadeynta afka dhalada gaarka ah, daboolka wareega warshadaha, ma laha suuf gudaha ah, si looga hortago dheecaan dareere ah;
6.Seril, reagent iyo xalka waa la dhalo karaa kadib kaydinta muddada-dheer;
7.Can noqon kartaa heerkul hoose oo muddo-dheer ah, kaydinta la qaboojiyey, dhalada ma dillaacdo.
Macaamiisha baahida gaarka ah leh, waxaan sidoo kale u qaabeyn karnaa una horumarin karnaa qaabab cusub oo dhalooyin ah iyo caaryado cusub oo loogu talagalay macaamiisha si gooni gooni ah, waxaanna uga tagi karnaa macaamiisha 'LOGO aan la arki karin oo ku saabsan alaabada.
9. Jirka dhalada wuxuu ka sameysan yahay polyetylen cufan-badan, koofiyadda dhalada waxaa laga sameeyay polypropylene-karka sare leh, oo leh iska caabin fiican oo kiimiko ah waxaana lagu nadiifin karaa shucaac.
10.Daagnostic reagent bottle waxaa loo isticmaali karaa baakadaha xalka mashiinka biyaha caadiga ah, oo ku habboon pH 5.5-9.0 baako kala duwan, kuma haboona yareynta baakadaha dareeraha ah ee xoogan.
MAYA. Sharaxaad Mugga Daboolka Midab Waxyaabaha Xirxirida / Ctns
PC1068 dhalada reagent 5ml Ku marooji Cadaan / bunni Polypropylene 2200
PC1069 dhalada reagent 8ml Ku marooji Cadaan / bunni Polypropylene 2000
PC1070 dhalada reagent 20ml Ku marooji Cadaan / bunni Polypropylene 1800
PC1071 dhalada reagent 30ml Ku marooji Cadaan / bunni Polypropylene 800
PC1072 dhalada reagent 60ml Ku marooji Cadaan / bunni Polypropylene 500
Hore: Microtube oo loo yaqaan 'Cryogenic Microtube'
Xiga: Shaabad saxan
Reagetn hoose oo leh daboolka fur
Qalabka fayriska 'Viral DNA / RNA' (Magnetic Beads)
Teknolojiyada Changheng waxaa aasaasay 2001 kooxdii ugu horreysay ee naqshadeynta caaryada, farsamaynta iyo soo saarista kooxda Foxconn.
Xiriir Faa'iido Leh
Nala soo xiriir Catalog
Cinwaanka: Maya. 109, Dong kai Road, Aaga Warshadaha Dongjing, Degmada Songjiang, Shanghai, Shiinaha